चिनी रोगका औषधि : कुन अवस्थामा कुन प्रयोग गर्ने ? - लोकसंवाद
खानामा परहेज गर्दा पनि चिनी रोग नियन्त्रण भएन भने चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर औषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो प्रकारको चिनी रोगको उपचार खाने ओखतीद्वारा गरिन्छ भने पहिलो किसिमको चिनी रोगमा इन्सुलिनको सुई नै दिनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो प्रकारको चिनी रोगमा खानामा परहेज गरेर र खानु पर्ने ओखती खाएर पनि नियन्त्रण भएन भने इन्सुलिनको आवश्यक पर्छ । इन्सुलिनको सुईको साथै खाने ओखती पनि खाएर चिनी रोगको उपचार गरिने चलन छ । केही प्रकारका खाने ओखतीहरुले इसुलिनलाई क्रियाशील तुल्याउँछन् । दोस्रो प्रकारको चिनी रोगमा इन्सुलिन भएता पनि क्रियाशील हुँदैन ।
चिनी रोगमा प्रयोग गरिने ओखतीहरूको नामावलीको लिस्ट धेरै लामो हुन सक्छ । चिनी रोगमा प्रयोग गर्ने ओखतीहरू खाने खालका र सुईद्वारा प्रयोग गरिने हुन्छन् ।इन्सुलिन बाहेक केही अन्य किसिमका ओखतीहरूलाई पनि सुईद्वारा प्रयोग गरिन्छ । इन्सुलिनलाई नाकबाट सुँघेर र इन्सुलिनको पम्पद्वारा पनि प्रयोग गरिन्छ । विशेष अवस्थामा प्याँक्रियाजलाई प्रत्यारोपण गरेर चिनी रोगको उपचार गर्न सकिन्छ । चिनी रोगमा प्रयोग गरिने ओखतीहरूको छोटो विवरण यो लेखमा प्रस्त्तुत गरिँदै छ ।
१. सल्फोनिलयुरिया (Sulfonyl Urea)
सन् १९३७ मा सल्फरले (Synthetic Sulfur Compounds) रगतको ग्लुकोज घटाउने गुण थाहा भएको थियो । सन् १९४६ मा अगष्टी लोबाटिरेले (Auguste Loubatires) यो समूहका औषधिले रगतको ग्लुकोज कम गराउने गुण भएको कुरा प्रकाशमा ल्याएका थिए । टलवुटामाइड (Tolbutarmide) र क्लोरप्रोपामाइड (Cholorpropamide) पहिलो श्रेणीका सल्फोनिल युरिया हुन् ।
सन् १९५० तिर टलवुटामाइडलाई जर्मनीमा उत्पादन गरिएको थियो । यो औषधिहरूलाई मैले पनि प्रयोग गरेको सम्झना ताजै छ । टलवुटामाइडले करोनरी आर्टरी रोग गराउन सक्छ । क्लोरप्रोपामाइडले ग्लुकोज धेरै कम गराउनुको साथै रगतको नुन पनि कम गराउन सक्छ । हिजो आज यी दुबै औषधिहरू प्रयोग गरिँदैनन् ।
चिनी रोग नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने औषधि इन्सुलिन हो । इन्सुलिनलार्ई सुईद्वारा प्रयोग गरिन्छ । खाने ओखतीहरूले चिनी रोग नियन्त्रण गर्न सकिएन भने इन्सुलिनको प्रयोग आवश्यक हुन्छ । हिजो आज धेरै प्रकारका इन्सुलिनहरू पाइन्छन् । केही इन्सुलिनहरू चाँडै काम गर्न थाल्दछन् र यिनीहरूको काम गर्ने अवधि छोटो हुन्छ भने ढिलो काम गर्ने र लामो अवधिसम्म काम गर्ने इन्सुलिन पनि हुन्छन् । इन्सुलिनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय जटिल भएकाले अनुभवी चिकित्सकको सल्लाह अनुसार इन्सुलिन प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
ग्लिपीजाइड र ग्लाइवुराइड दोस्रो श्रेणीका सल्फोनिलयूरिया सन् १९८४ मा प्रयोगमा ल्याइएका थिए । तेस्रो श्रेणीको सल्फोनिल युरिया ग्लिमेपिराइड हो ।
ग्लिपीजाइड र ग्लाइकाजाइड छोटो अवधि काम गर्ने औषधिहरू हुन् र यिनीहरुलाई मिर्गौलाका रोगीहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । सल्फोनिल युरिया समूहका ओखतीहरूले तौल बढाउन पनि सक्छन् ।
ग्लाइवुराइड सल्फोनिल युरिया समूहमा पर्छ । यो सन् १९८४मा एफ.डि. ए.द्वारा स्वीकृति प्राप्त ओखती हो । यसको अर्को नाउँ डावनिल पनि हो । यो ओखती एक घण्टापछि काम गर्न थाल्छ । सबभन्दा ज्यादा काम ४ घण्टा पछि हुन्छ र यसले २४ घण्टासम्म काम गर्छ ।
French Lilac अथवा Goat's Rue भनेको एक किसिमको बोट हो र यसमा ग्वानिडिन (Guanidine) नामक पदार्थ पाइन्छ । युरोपमा यसलाई चिनी रोगको उपचारमा प्रयोग गरिएको थियो । सन् १९६० तिर फेनफोर्मिनको विषयमा धेरै अध्यायनहरु अमेरिकामा भएका थिए । मेटफोर्मिनका विषयमा फ्रान्समा अध्ययन भएको हो । मेटफोर्मिनलाई सन् १९५९ मा चिनी रोगको उपचार गर्न प्रयोग गरिन थालिएको थियो । अमेरिकामा यसलाई प्रयोग गर्ने स्वीकृति सन् १९९० सम्म दिइएको थिएन ।
हिजोआज चिनी रोगको उपचारमा सबभन्दा पहिले प्रयोग गरिने ओखती मेटफोर्मिन नै हो । मिर्गौला र कलेजोको रोग भएका रोगीहरूलाई मेटफर्मिन प्रयोग गर्नु हुँदैन । आयोडिन भएको सुई दिएर गरिने एक्स-रे गर्नु पर्ने बिरामीहरूले केही दिन मेटफोर्मिन बन्द गर्नैपर्छ । गर्भावस्थामा र दूध खुवाउने महिलाहरूलाई मेटाफोर्मिन खान दिन सकिन्छ । डायवेटिज भई नसकेका तर हुने सम्भावना भएकाहरूलाई मेटाफोर्मिनद्वारा उपचार गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा विशेषज्ञहरू सहमत भएको पाइन्छ ।
३. अल्फा–ग्लुकोसाइडेज इन्हिविटर
यो समूहका औषधिहरूले माल्टेज (Maltase) र सुक्रेज (Sucrose) ) जस्ता ईञ्जायमहरुलाई निष्क्रिय तुल्याएर रगतको ग्लुकोज कम गराउँछन् । एकार्वोस (Acarbose) यो समूहको ओखती हो र यसले एफ.डि.ए. द्वारा सन् १९९५मा चिनी रोगमा प्रयोग गर्न सकिने अनुमति पाएको हो । यो समूहको अर्को ओखतीको नाउँ मिग्लिटोल (Miglitol) हो ।
यो समूहको रिपाग्लिनाइड नामक ओखतीले चिनी रोगमा प्रयोग गर्न सकिने अनुमति एफ.डि.ए.द्वारा सन् १९९७ मा पाएको थियो । यो समूहको अर्को ओखतीको नाम नाटग्लिनाइड (Nateglinide) हो । यो समूहका औषधिहरूले प्याङक्रियाजद्वारा इन्सुलिन पैदा गरेर रक्त ग्लुकोज कम गराउँछन् । यी औषधीहरूले तुरुन्तै काम गर्छन् र यिनीहरूको काम गर्ने अवधि पनि छोटो हुन्छ । रिपाग्लिनाइलाई मिर्गौला रोगीहरुमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
५. Glucagon-Like Peptide-Receptor Agonists (GLP-1)
ग्लुकोजलाई शिराद्वारा भन्दा खान दिँदा इन्सुलिन ज्यादा उत्पन्न हुने अवस्थालाई Incretin effect भनिन्छ । GLP-1 ले इन्सुलिन पैदा गरेर बढेको ग्लुकोजलाई कम गराइएको पाइएको थियो । GLP-1 लाई Dipepeptidyl Peptidase-4 or DPP-4 नामक इन्जाइमले नष्ट पार्ने भएकाले यसले धेरै छोटो अवधिसम्म मात्र काम गरेको पाइयो । यसर्थ लामो अवधि काम गर्ने DLP-1 analogs र Dpp-4 ईन्जायमलाई निष्क्रिय तुल्याउने ओखती पत्ता लागाईयो । जिएलपी–१ को एनालगुलाई सर्वप्रथम Gila Monster को सालीभरी ग्रन्थिबाट पत्ता लगाइयो । सन् २००५ मा Exenatide बनाएर चिनी रोगीहरूमा प्रयोग गरियो । यो पछि अर्को जिएलपी–१ एनालग लिराग्लुटाइड पत्ता लगाइयो र यसले सन् २०१०मा चिनी रोगीहरूमा प्रयोग गर्न सकिने अनुमति पायो । सन् २०१२ मा एक हप्तासम्म काम गर्ने Exenatide ले अनुमति पाएको थियो । यो औषधि सुइद्वारा प्रयोग गरिन्छ । यो समूहमा पर्ने अन्य औषधिहरूको नाउँ Lixsenatide र Albiglutide हुन । यो समूहका औषधिहरूले तौल घटाउन मद्दत गर्छन् ।
सन् २००६मा अनुमति प्राप्त गर्ने Sitagliptin यो समूहमा पर्छ । Alogliptin र Vilagliptin यो समूहका अन्य ओखतीह्रु हुन् । यो समूहको औषधिहरूले तौल घटाउने बढाउने गर्दैनन् ।
६ . Amylin Agonists
एमाइलिन हर्मोन प्यांक्रियाजबाट इन्सुलिनसँगै उत्पन्न हुन्छ । दोस्रो किसिमको चिनी रोगमा यो कम मात्रामा पाइन्छ भने पहिलो प्रकारको चिनी रोगीहरूमा यो हुँदै हुँदैन भने पनि हुन्छ । एमाइलिनले इन्सुलिन बढाउँदैन । यसले खाना पछि पैदा हुने ग्लुकागोनलाई कम गराउनुका साथै पेटबाट आन्द्रामा खाना ढिलो पुर्‍याउँछ । यिनै कारणले गर्दा रगतको ग्लुकोज कम हुन्छ ।
प्रामलिनटाइड (Pramlintide) ले एमाइीलनको जस्तै काम गर्छ र यसलाई चिनी रोगमा सुईद्वारा प्रयोग गरिन्छ । यो ओखती एकदमै रगतको ग्लुकोज कम गराउने अवगुण हुँदैन र यसले तौल पनि बढाउँदैन ।
यो समूहका औषधिहरूलाई ग्लिटाजोन्स पनि भनिन्छ र यिनीहरूलाई सन् १९९६ देखि अमेरिकामा प्रयोग गरिन थालिएको हो । यिनीहरूलाई peroxisome proliferator - activated receptors भनिन्छ र मांसपेशीमा इन्सुलिनलाई ज्यादा क्रियाशील तुल्याउनुका साथै यिनीहरूले कलेजोबाट ग्लुकोज कम उत्पादन गराउँदछन् । Pioglitazone र Rosiglitazone यो समूहका ओखती हुन् ।
यो औषधिलाई चिनी रोगीहरूमा सर्वप्रथम सन् २००९मा अमेरिकामा प्रयोग गरिएको थियो ।
कोलेसेभेलामलाई चिनी रोगीहरूको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने अनुमति सन् २००८ मा मात्र प्राप्त भएको हो ।यो औषधिले रगतको एलडिएल कोलेस्ट्रोल र ग्लुकोज कम गराउँछ भने ट्राइग्लिसेराइडलाई केही मात्रामा बढाउन सक्छ ।
१०.Sodium Glucose Co-Trans Porter2Inhibitors
एसजिएलटी–२ Inhibitors ले करिब ९० प्रतिशत ग्लुकोज मिर्गौलाबाट रगतमा जान रोक्छ र रगतको ग्लुकोज कम गराउँछ । यी समूहका औषधिले तौल पनि कम गराउँछन् । Canagliflozin, Dapagliflozin र Empagliflozin यो समूहका औषधिहरू हुन् । कानाग्लिफोजिन ले सन् २०१३ मा र डापाग्लिफ्लोजिनले २०१४ मा चिनी रोगीहरुको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने अनुमति पाएका हुन् ।
११. माथि उल्लेख गरिएका धेरैजसो औषधिहरू बिरामीलाई खाना दिएर उपचार गरिन्छ । यिनीहरू मध्य केही ओखतीहरूलाई सुईद्वारा प्रयोग गरिन्छ ।